File:Reopening of 53rd St ESI Station (36918280046).jpg - ဝီကီပီးဒီးယား
File:Reopening of 53rd St ESI Station (36918280046).jpg
ဤနမူနာ၏ အရွယ်အစား - ၈၀၀ × ၅၃၃ ပစ်ဇယ်။ အခြား ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု: ၃၂၀ × ၂၁၃ ပစ်ဇယ် | ၆၄၀ × ၄၂၇ ပစ်ဇယ် | ၁၀၂၄ × ၆၈၃ ပစ်ဇယ် | ၁၂၈၀ × ၈၅၃ ပစ်ဇယ် | ၂၀၄၈ × ၁၃၆၅ ပစ်ဇယ်။
မူရင်းဖိုင် ‎(၂၀၄၈ × ၁၃၆၅ pixels, ဖိုင်အရွယ်အစား - ၁.၄၄ MB, MIME အမျိုးအစား image/jpeg)
ဖော်ပြချက်Reopening of 53rd St ESI Station (36918280046).jpg
MTA Managing Director Veronique "Ronnie" Hakim reopened the 53 St Station on the R line in Brooklyn on Fri., September 8, 2017, afterarehabilitation under the Enhanced Station Initiative (ESI.) The initiative modernizes stations and features improved customer experience. Photo: Marc A. Hermann / MTA New York City Transit
ရက်စွဲ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇, ၁၀:၄၃
ရင်းမြစ် Reopening of 53rd St ESI Station
စာရေးသူ Metropolitan Transportation Authority of the State of New York
ဤဖိုင်သည် Creative Commons Attribution 2.0 Generic လိုင်စင်အောက်တွင် လိုင်စင်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
မှတ်ယူနိုင်ခြင်း – ဖန်တီးသူ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရှိသူမှ သတ်မှတ်သော အမျိုးအစားကို လိုက်နာရမည် (ဆိုလိုသည်မှာ သင့်အား သို့မဟုတ် သင့်ဖန်တီးမှုတွင် အသုံးပြုခြင်းအား ထောက်ခံချက်ပေးသည်ဟု မဆိုလိုပါ)။
This image was originally posted to Flickr by MTAPhotos at https://flickr.com/photos/61135621@N03/36918280046. It was reviewed on ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ by FlickreviewR and was confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-2.0.
ကာလပေါ် ၁၉:၂၉၊ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ ၂၀၄၈ × ၁၃၆၅ (၁.၄၄ MB) Epicgenius Transferred from Flickr via Flickr2Commons
ဤဖိုင်ကို အသုံးပြုထားသော စာမျက်နှာများမရှိပါ။
meta.wikimedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
၁/၈၀ စက္ကန့် (၀.၀၁၂၅)
၁၀:၄၃၊ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇
MTA Executive Director Veronique "Ronnie" Hakim reopened the 53 St Station on the R line in Brooklyn on Fri., September 8, 2017, afterarehabilitation under the Enhanced Station Initiative (ESI.) The initiative modernizes stations and features improved customer experience.Photo: Marc A. Hermann / MTA New York City Transit
Photographer, Marc A. Hermann
ESI - 53 St
"https://my.wikipedia.org/wiki/File:Reopening_of_53rd_St_ESI_Station_(36918280046).jpg" မှ ရယူရန်